ရိုးရိုးခင်တတ်တဲ့လူနဲ့ အီစီကလီလုပ်တတ်တဲ့လူကြားက ကွာခြားချက် - For her Myanmar
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲဝင်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတော့သိထားဖို့ လိုမယ်နော်…
ခင်တတ်မင်တတ်တာနဲ့ အီစီကလီလုပ်တာနဲ့ တကယ်အကွာကြီးနော်။ တချို့များကျတော့ ခင်တတ်လို့ပါ ဆိုတဲ့စကားကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဖောရှောရိုက်တာ ရိုက်တာဆိုတာလေ။ (ကိုယ်လည်းသိမှမသိတာ) အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ဘက်ကတော့ရိုးရိုးသားသား သူ့ဘက်ကမရိုးမသားပြောဆိုနေတာကို နားမလည်ဘဲ ကိုယ်ကစကားတွေပြန်ပြော၊ သူ့ဘက်ကတော့ ရေလာမြောင်းပေးလုပ်တယ်လို့ထင်ပြီး ရှေ့ဆက်တိုးတော့မှ ကိုယ်ကငြင်းချလိုက်တဲ့အခါ ဝူးဝူးဝါးဝါးတွေ ထဖြစ်ပြီး မျက်နှာပျက်ရတာမျိုးတွေ ရှိတတ်တာမို့ ဒီအချက်လေးတွေကိုတော့ သိကိုသိထားသင့်ပါတယ်။
ကြာကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတာ ကြားဖူးလားယောင်းတို့? ရိုးရိုးသာမန် ခင်တတ်တဲ့လူတွေကတော့ မျက်လုံးအကြည့်ကိုက ရိုးသားပါတယ်။ တခြားဘာဘာညာညာ အရိပ်အယောင်တွေ မပါတဲ့အပြင် ကိုယ့်မျက်လုံးကိုကလွဲပြီး တခြားဘယ်နေရာကိုမှ တောင်တောင်အီအီ ဝေ့ကြည့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အီစီကလီရိုက်ချင်တဲ့လူတွေကတော့ ကိုယ့်ကိုစတွေ့တာနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး ခြုံကြည့်တဲ့အပြင် အကြည့်ထဲမှာ ကြာအကြည့်တွေလည်း ပါနေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တော့ ပထမဆုံးမျက်လုံးချင်းဆုံတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုဘာညာအထာတွေ လုပ်နေရင်တော့ ဝေါင်ဝေါင်သာရှေးပါလို့။
ရိုးရိုးခင်တတ်မင်တတ်တဲ့ လူတွေပြောတဲ့စကားမှာ နင်ဘယ်လိုမျိုးစားသောက်ဆိုင်မှာ စားရတာကြိုက်လဲ၊ နင်ကဘယ်လိုလူမျိုးဆိုသဘောကျတတ်တာလဲ စသည်ဖြင့်အရမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာဆန်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေးမှာမဟုတ်သလို သူကလူလွတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း အတင်းကာရောထုတ်ပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်း ဟေး နင့်နာမည်ကဘာလဲ၊ ဘာအလုပ်လုပ်လဲ စသည်ဖြင့် ရိုးရိုးသာမန်မေးခွန်းလောက်နဲ့ပဲ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် စကားပြောပါလိမ့်မယ်။
ဒီတစ်ချက်ကတော့ သိသာမယ်ထင်တယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့နေရာကနေလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေတောင် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာလောက် လုပ်နေတဲ့အချိန် ဒင်းကခါးဖက်၊ ပခုံးပွေ့စတာတွေကို ပိုင်ဇိုးပိုင်နင်းလုပ်လာပြီဆိုရင် သဘောပေါက်လိုက်ပါတော့။ မတော်တဆထိမိတာနဲ့ တကယ်ကိုင်တာတောင် အကွာကြီး။ ဥပမာ ကိုယ်ကချော်လဲတော့မလို ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာဆိုရင် ရိုးရိုးသာမန်လူက ထိန်းပေးရုံလောက် ကိုင်တာဆိုပေမဲ့ ဘာညာအထာသမားကတော့ သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲပွေ့သွားပါလိမ့်မယ်။
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ အကွာအဝေးတစ်ခုတော့ အမြဲတမ်းထားရပါတယ်။ ရိုးရိုးသာမန်ခင်တတ်သူတွေကတော့ ကိုယ်နဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းအနေအထားမှာပဲ စကားပြောတတ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ကို အီချင်နေတဲ့လူကတော့ ကိုယ်နဲ့အသားချင်းထိဖို့အတွက် အတင်းကာရောအားထုတ်နေမှာမို့ ကိုယ်နဲ့နီးနိုင်သမျှနီးအောင် လာနေပါလိမ့်မယ်။
Related Article >>> ချစ်သူတွေကြားမှာ ဝင်ရှုပ်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ
(၅) စကားပြောပုံဆိုပုံနဲ့ အပြုအမူ
သူတို့ရဲ့စကားပြောပုံဆိုပုံနဲ့ အပြုအမူကလည်း သူဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ သိဖို့အတွက်အရေးပါပါတယ်။ မပွင့်တပွင့်ပြုံးတာ၊ စကားပြောနေရင်း ဟိုထိဒီကိုင်လုပ်တာ၊ ပြောဆိုနေရင်းတန်းလန်း ကိုယ့်ကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေတာမျိုးတွေ စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်း အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြောဆိုနေတုန်းတန်းလန်း သူ့အကြောင်းတွေကို မသိမသာ၊ သိသိသာသာဖြစ်အောင် ပြောဆိုနေတာမျိုးတွေ လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဒီလူနဲ့ရေရှည်မှာဆက်လက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ပြန်စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရိုးသာမန်လူကတော့ ပုံမှန်အတိုင်း အပိုအလိုမရှိဘဲ ပြောဆိုသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီအချက်လေးတွေကတော့ ရိုးရိုးခင်တတ်တဲ့လူနဲ့ အီစီကလီလုပ်တတ်တဲ့လူကြားက ကွာခြားချက်တွေပေါ့နော်။ နောက်ပြီး လူတွေမှာက ဆဠမအာရုံဆိုတာမျိုးရှိတော့ ဒီအဆင့်တွေမရောက်ခင်မှာဘဲ အာရုံထဲမှာခပ်နောက်နောက်ဖြစ်သွားရင် အဲ့စကားဝိုင်းထဲကနေ အလိမ္မာသုံးပြီးသာ ထွက်လာလိုက်ပါ။ နှင်းရဲ့ယောင်းယောင်းလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်တတ်ကြပါစေ။
References : bustle, wikihow, yourtango
လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးထဲဝငျတော့မယျဆိုရငျ ဒါလေးတော့သိထားဖို့ လိုမယျနျော…
ခငျတတျမငျတတျတာနဲ့ အီစီကလီလုပျတာနဲ့ တကယျအကှာကွီးနျော။ တခြို့မြားကတြော့ ခငျတတျလို့ပါ ဆိုတဲ့စကားကို အခှငျ့ကောငျးယူပွီး ဖောရှောရိုကျတာ ရိုကျတာဆိုတာလေ။ (ကိုယျလညျးသိမှမသိတာ) အထူးသဖွငျ့ ကိုယျ့ဘကျကတော့ရိုးရိုးသားသား သူ့ဘကျကမရိုးမသားပွောဆိုနတောကို နားမလညျဘဲ ကိုယျကစကားတှပွေနျပွော၊ သူ့ဘကျကတော့ ရလောမွောငျးပေးလုပျတယျလို့ထငျပွီး ရှဆေ့ကျတိုးတော့မှ ကိုယျကငွငျးခလြိုကျတဲ့အခါ ဝူးဝူးဝါးဝါးတှေ ထဖွဈပွီး မကျြနှာပကျြရတာမြိုးတှေ ရှိတတျတာမို့ ဒီအခကျြလေးတှကေိုတော့ သိကိုသိထားသငျ့ပါတယျ။
ကွာကွညျ့ကွညျ့တယျဆိုတာ ကွားဖူးလားယောငျးတို့? ရိုးရိုးသာမနျ ခငျတတျတဲ့လူတှကေတော့ မကျြလုံးအကွညျ့ကိုက ရိုးသားပါတယျ။ တခွားဘာဘာညာညာ အရိပျအယောငျတှေ မပါတဲ့အပွငျ ကိုယျ့မကျြလုံးကိုကလှဲပွီး တခွားဘယျနရောကိုမှ တောငျတောငျအီအီ ဝကွေ့ညျ့နမှောမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အီစီကလီရိုကျခငျြတဲ့လူတှကေတော့ ကိုယျ့ကိုစတှတေ့ာနဲ့ တဈကိုယျလုံး ခွုံကွညျ့တဲ့အပွငျ အကွညျ့ထဲမှာ ကွာအကွညျ့တှလေညျး ပါနပေါလိမျ့မယျ။ အဲ့တော့ ပထမဆုံးမကျြလုံးခငျြးဆုံတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့ကိုဘာညာအထာတှေ လုပျနရေငျတော့ ဝေါငျဝေါငျသာရှေးပါလို့။
ရိုးရိုးခငျတတျမငျတတျတဲ့ လူတှပွေောတဲ့စကားမှာ နငျဘယျလိုမြိုးစားသောကျဆိုငျမှာ စားရတာကွိုကျလဲ၊ နငျကဘယျလိုလူမြိုးဆိုသဘောကတြတျတာလဲ စသညျဖွငျ့အရမျးပုဂ်ဂိုလျရေးရာဆနျတဲ့ မေးခှနျးတှကေို မေးမှာမဟုတျသလို သူကလူလှတျဖွဈတဲ့အကွောငျးကိုလညျး အတငျးကာရောထုတျပွောနမှောမဟုတျပါဘူး။ ဒီအတိုငျး ဟေး နငျ့နာမညျကဘာလဲ၊ ဘာအလုပျလုပျလဲ စသညျဖွငျ့ ရိုးရိုးသာမနျမေးခှနျးလောကျနဲ့ပဲ မိတျဖွဈဆှဖွေဈ စကားပွောပါလိမျ့မယျ။
ဒီတဈခကျြကတော့ သိသာမယျထငျတယျ။ ပှငျ့လငျးတဲ့နရောကနလောတဲ့ နိုငျငံခွားသားတှတေောငျ လကျဆှဲနှုတျဆကျတာလောကျ လုပျနတေဲ့အခြိနျ ဒငျးကခါးဖကျ၊ ပခုံးပှစေ့တာတှကေို ပိုငျဇိုးပိုငျနငျးလုပျလာပွီဆိုရငျ သဘောပေါကျလိုကျပါတော့။ မတျောတဆထိမိတာနဲ့ တကယျကိုငျတာတောငျ အကှာကွီး။ ဥပမာ ကိုယျကခြျောလဲတော့မလို ဖွဈနတေဲ့အနအေထားမှာဆိုရငျ ရိုးရိုးသာမနျလူက ထိနျးပေးရုံလောကျ ကိုငျတာဆိုပမေဲ့ ဘာညာအထာသမားကတော့ သူ့ရငျခှငျထဲ ဆှဲပှသှေ့ားပါလိမျ့မယျ။
လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျကွားမှာ အကှာအဝေးတဈခုတော့ အမွဲတမျးထားရပါတယျ။ ရိုးရိုးသာမနျခငျတတျသူတှကေတော့ ကိုယျနဲ့ခပျလှမျးလှမျးအနအေထားမှာပဲ စကားပွောတတျပမေဲ့ ကိုယျ့ကို အီခငျြနတေဲ့လူကတော့ ကိုယျနဲ့အသားခငျြးထိဖို့အတှကျ အတငျးကာရောအားထုတျနမှောမို့ ကိုယျနဲ့နီးနိုငျသမြှနီးအောငျ လာနပေါလိမျ့မယျ။
Related Article >>> ခဈြသူတှကွေားမှာ ဝငျရှုပျတတျတဲ့ သူငယျခငျြးမြား
(၅) စကားပွောပုံဆိုပုံနဲ့ အပွုအမူ
သူတို့ရဲ့စကားပွောပုံဆိုပုံနဲ့ အပွုအမူကလညျး သူဘယျလိုလူမြိုးလဲဆိုတာ သိဖို့အတှကျအရေးပါပါတယျ။ မပှငျ့တပှငျ့ပွုံးတာ၊ စကားပွောနရေငျး ဟိုထိဒီကိုငျလုပျတာ၊ ပွောဆိုနရေငျးတနျးလနျး ကိုယျ့ကိုအကွာကွီးစိုကျကွညျ့နတောမြိုးတှေ စကားပွောတဲ့အခါမှာလညျး အကွောငျးအရာတဈခုကို ပွောဆိုနတေုနျးတနျးလနျး သူ့အကွောငျးတှကေို မသိမသာ၊ သိသိသာသာဖွဈအောငျ ပွောဆိုနတောမြိုးတှေ လုပျနပွေီဆိုရငျတော့ ဒီလူနဲ့ရရှေညျမှာဆကျလကျတှဲပွီး အလုပျလုပျဖို့အတှကျ ပွနျစဉျးစားရပါလိမျ့မယျ။ ရိုးရိုးသာမနျလူကတော့ ပုံမှနျအတိုငျး အပိုအလိုမရှိဘဲ ပွောဆိုသှားပါလိမျ့မယျ။
ဒီအခကျြလေးတှကေတော့ ရိုးရိုးခငျတတျတဲ့လူနဲ့ အီစီကလီလုပျတတျတဲ့လူကွားက ကှာခွားခကျြတှပေေါ့နျော။ နောကျပွီး လူတှမှောက ဆဠမအာရုံဆိုတာမြိုးရှိတော့ ဒီအဆငျ့တှမေရောကျခငျမှာဘဲ အာရုံထဲမှာခပျနောကျနောကျဖွဈသှားရငျ အဲ့စကားဝိုငျးထဲကနေ အလိမ်မာသုံးပွီးသာ ထှကျလာလိုကျပါ။ နှငျးရဲ့ယောငျးယောငျးလေးတှေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ကာကှယျတတျကွပါစေ။
Tags: Career, communication, difference, Flirty, friendly, life, tips